Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Kazakhstan » Air Astana dia mandefa serivisy Meet & Greet
Air Astana dia hanolotra serivisy Meet & Greet ao amin'ny seranam-piaramanidina Almaty sy Nur-Sultan
Serivisy vaovao dia natao hampandehanana ny dia mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina
Ny escorts amin'ny fiainganana sy fahatongavana dia hihaona amin'ny mpandeha amin'ny toerana fidirana sy fivoahana voatondro ao anatin'ny terminal
Homena fanampiana ny fikirakirana entana, ny fidirana ary ny fidirana
Air Astana dia hanolotra serivisy Meet & Greet ho an'ny mpandeha amin'ny fahatongavany sy fiaingana ao amin'ny seranam-piaramanidina Almaty sy Nur-Sultan, ary koa serivisy fitaterana an-tseranana any amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt, manomboka amin'ny 9 aprily 2021.
Ny serivisy vaovao dia natao hisosa Air Astana dia ny mpandeha namakivaky ny seranam-piara-manidina, miaraka amina ezaka tsy misy fika amin'ny fomba fanao takiana ilaina amin'ny dia iraisam-pirenena.
Ao Almaty sy Nur-Sultan, ny mpitsangatsangana sy ny fahatongavany dia hihaona amin'ny mpandeha amin'ny toerana fidirana sy fivoahana voatondro ao anatin'ny terminal, miaraka amin'ny fanampiana omena amin'ny fikirakirana entana, fidirana ary fidirana. Any Frankfurt, ny mpandeha mampiasa ny serivisy fitaterana dia ho hitan'ny mpanaraka amin'ny varavaran'ny fiaramanidina na fidirana amin'ny terminal, miaraka amin'ny fomba hafainganam-pandeha ho an'ny sidina mampifandray ho an'ny mpandeha sy ny entany.
Air Astana, mpitatitra saina any Kazakhstan, dia nanomboka ny asany tamin'ny Mey 2002 ho toy ny fiaraha-miombon'antoka eo amin'ny tahirim-bolam-pirenena Kazakhstan, Samruk Kazyna, ary BAE Systems, miaraka amin'ny anjarany 51% sy 49%.
Air Astana dia mpitatitra serivisy iraisam-pirenena sy an-trano feno serivisy ary ny fizarana mora vidy, FlyArystan dia mitombo haingana eo amin'ny tsena anatiny. Ny zotram-piaramanidina dia miasa fiaramanidina 34 ahitana an'i Boeing 767, Airbus A320 / A320neo, Airbus A321 / A321neo / A321LR ary Embraer E190-E2.